WOWOW qasabada saxan ee qolka musqusha oo la cadayday nickel baahsan - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qasabadaha Musqusha oo Fidsan / WOWOW Musqusha Qiiqa Musqusha Oo Lagu Nadiifiyo Nickel Baafin
Qolka musqusha ee WOWOW Fucet Nadiifiyaha Nickel ee Fidsan
2321300 tilmaamaha rakibaadda
WAREEJINTA WAREEJINTA NAQDINTA WAA LA QABAN KARAA: 3 Hole Mount oo leh 6-16-inji ah Naqshad Baahsan, masaafadu waxay ku xiran tahay shuruudahaaga dhabta ah.
QAADKA QALABKA KHASAARAHA QIIMEYNTA PREMIUM: Isku xira naxaas adag, culus oo raagaya. Kartoonka dhoobada ee wax lagu shaabadeeyo oo sarreeya, waxay leeyihiin waxqabad aan dhibic lahayn. Iyo aerator-ka NEOPERL ee biyo-badbaadinta ayaa qalabaysan.
FARSAMADA ISKU XIRAN EE FARSAMADA. Ku keydi khidmadda rakibidda tuubada tuubada wowow.
LABO DHIBAATOOYINKA HOOSE: Laba gacmood oo loogu talagalay socodka iyo dadaalka xakamaynta heerkulka biyaha. La imow daadi-pop-up si aad u fiican. Dahaarka la jeexay ee qasabadan musqusha musqusha waa miridhku, daxalka, iyo soo -bax u adkaysta oo ma urursan doono faraha.
Qolka musqusha Fluet Nickli 2321300 faahfaahinta
Qulqulka bullaacadda ee cusboonaysiinta ayaa ka sahlan in la dejiyo oo la isticmaalo marka loo eego bullaacadda caadiga ah.
Tikniyoolajiyadda isku xidhka degdegga ah ee hal abuurka ah - aasaaska aasaasiga ah ee isku xidhka dhismuhu waa sahlan tahay in aad kaligaa iska rakibto adiga oo aan lahayn tuubiste! Keydso qarashka rakibaadda tuubada ee tuubada qoryaha!
Qaybta 3-dalool oo leh 4-16-inji dherer ballaadhan —- rakibid fudud.
Xawaaraha buluuga ah ee dareeraha ah ee loo yaqaan 'Nickel tubrus Nickel end': 2 qaban qaababka qasabadaha buluuga ah ee loo yaqaan 'nickel layout' qaabka loo yaqaan 'retro'. Faraxinta faraha, iska jir waxyeellada. Qolka biyaha hoosta laga xirto ee guryaha lagu kireysto ee guryaha lagu kireeyo, aqal-kireyste cusub, aqal keliya, guri baabuur, tareenada safarka, iyo isticmaalka guryaha.
Tayada ugu sareysa ee biyaha leh ee 'Fucet' oo leh dammaanad 3-sano ah: abs aerator wuxuu ilaaliyaa 50% biyo iyo anti-splatter, oo si toos ah looga gooyo gacmahaaga si aad u maydho (qalab aadan u baahnayn). Xirmooyinka dhoobada aan dhoobada lahayn ee dhoobada leh ayaa guuleysta.
SKU: 2321300 Categories: Qubeyska Musqusha, Qasabadaha Musqusha oo Fidsan Tags: qasacad-qas, saddax dalool oo dalool leh, Fidsan
3-god; qasabad baahsan
Laba gacan qabsi
Tuubbo ballaaran: 8-16 inji
Tuubada Faafsan * 1, Qeexitaanka rakibaadda * 1, Soo daadi qubays * *